Andriambavy Disney nantsoina ho tovovavy maoderina | Famoronana an-tserasera
Anoosha dia a mpanao sary an'ny ankizy ary mpamolavola toetra ho an'ny sarimiaina izay mitondra antsika sary manaitaitra tena mahaliana izay ahitantsika ireo andriambavy Disney tamin'ny androm-piainany aseho toa ireo tovovavy maoderina ankehitriny.
Ny artista mpamorona amin'ity andiany ity dia a olon-tiany Disney Princess Ary amin'ny fotoanany malalaka dia namorona sary nomerika izy izay anisany sary an-tsaina hoe hanao ahoana ireo tovovavy ireo raha toa ka tanora sy tanora tanora izy ireo amin'ity taonjato faha-XNUMX ity.
Ao amin'ny mifandraika amin'i Disney nitondra filokana sy sanganasa samihafa avy amin'ny mpanakanto isan-karazany isika tato anatin'ny volana lasa. Koa satria hanao ahoana ny andriambavilanitra Disney amin'ny nofo, eny Tim Burton Izaho no nitantana ny sarimihetsika na ny endri-tsoratra mampiavaka an'ity orinasa nofinofy avy amin'i Jackie Huang ity sy ny azy manokana predilection ho an'ny taratasy. Fomba mahasarika maso hisintomana ny saina, satria ny tantara sy ny tarehin-tsoratra Disney dia tafiditra anaty kolontsaina malaza.
Anoosha no mitondra antsika affomba tena misy sy tsy miraharaha kokoa rehefa mitondra antsika eo alohan'ireo andriambavy Disney izay ao anatin'ny toe-javatra sy toe-javatra iainan'ireo tanàna sy tanàna, fandotoana na smartphone. Izy tenany ihany no milaza amintsika fa nanandrana nahatoky faran'izay azo atao tamin'ny toetran'ny andriambavy tsirairay izy tamin'ny fanoratana tranom-baravarana kely ho an'ny litera asehony amin'ity andiany mahaliana ity.
ny sasany fanoharana tena tsara ary manasongadina ny fitsaboana tsara ananan'ity mpanao sary ity amin'ny lokony sy ny fomba ahitana an'io feo milay sy mahafinaritra io ao amin'izy ireo tsirairay avy, zavatra manokana sy mendrika hotononina.
Araka ny tiako atao foana, ary raha azonao atao, dia ampitako ianao ny tranokalanao mba hainao hianatra bebe kokoa momba Anoosha ary ireo sary ho an'ny ankizy izay tiany sary sy sary be dia be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny andriambavy Disney dia nalaina tahaka ny zazavavy maoderina